Classic blackjack. Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny blackjack 21 (2022)
Casinos tsara indrindra
Casinos tsara indrindra amin'ny Internet 2022
Tena vola be blackjack
Tena	/ Fiovana	/ Classic blackjack
Ny rehetra momba ny Blackjack mahazatra. Blackjack 21 - Paikady, fitsipika ary lalao maimaim-poana
Classic Blackjack na BlackJack 21 dia mora ny dikan-teny fototra indrindra amin'ny lalao. Ireo mpilalao dia mankafy an'io dikan-teny io satria mamela azy ireo ny sasany amin'ireo safidy filokana tena tsara indrindra ary amin'ny ankapobeny dia manamora ny mpilalao amin'ny kilasy fahaiza-manao hanaraka ny hetsika. Mijery ny lalao rehetra isika, ary eto ambany daholo izay tokony ho fantatrao.
Play for tena vola
Backjack mahazatra mahazatra
Ity lalao ity dia iray amin'ireo tsotra indrindra milalao ary mankafy. Mba hilalao ny Blackjack, ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny mahita casino azo itokisana. Vantany vao azonao atao dia ho afaka manaraka ny lalao ianao. Ity misy fanimbana ny fototry ny fihodinan'ny lalao.
Blackjack Classic dia milalao amin'ny mpivarotra
Ny lalao indrindra dia manana deck tokana
Ny karatra rehetra manomboka amin'ny 2-9 dia mendrika ny lanjany aseho
Ny karatra rehetra amin'ny 10 ka hatramin'ny K dia mitentina folo isa
Ny Aces dia miavaka satria mety ho isa na isa iray izy ireo
Ny lalao dia manana setup tsotra izay mety hiatrehana karatra roa amin'ny voalohany. Ireo karatra roa ireo dia miatrika tarehy manohitra ny carte de marefo sy ny endrika tarehy. Rehefa afaka izany, dia tsy manomboka ny lalao amin'ny lalao Blackjack amin'ny Internet.
Ny tranonkala Casino Casino Classic tsara indrindra
Ahoana ny hilalao Blackjack Classic
Ny dikan-tsarimihetsika mahazatra amin'ny lalao dia iray amin'ireo malaza indrindra ao. Tsotra ny hianaranao, ary ny hoe ny mpivarotra dia tsy misy afa-tsy 52-karatra tokana dia midika fa ny mpilalao dia manana sisiny tsara kokoa mba hiatrehana.
Izany no antony tsy an-tserasera ny Blackjack 21 amin'ny lalao mahazatra indrindra, fa ny iray amin'ireo tsara indrindra hahafinaritra raha milalao amin'ny mpivarotra casino ianao. Ireto misy fitsipika mandinika rehefa milalao ity dikan-teny ity:
Raha mahazo tanana 21-posy mahitsy hatramin'ny voalohany ianao (mazàna ahitana ny ACE sy ny karatra tokana) dia mandresy ho azy ianao
Raha mahazo blackjack voajanahary ianao amin'ny fotoana iray izay ataon'ny mpivarotra dia ho raikitra toy ny fatorana ny lalao, izay antsoina koa hoe "Push" amin'ny 21 Blackjack amin'ny Internet
Na ny mpilalao sy ny mpivarotra dia ho very raha mihoatra ny 21 isa ny tanany. Ity dia antsoina hoe "bust" ao amin'ny terminology Blackjack
Na izany aza, mahaliana ny zava-drehetra raha efa niatrika ny tananao roa voalohany ary tsy dia mihoatra ny 21 isa ianao. Izany foana no hitranga. Hatramin'izay dia afaka misafidy safidy maro ianao:
Hit: Nentinao ny hetsika mikapoka rehefa te hanatsara ny tananao ianao ary vonona hampidi-doza amin'ny fanaovana karatra hafa.
Mitsangàna: Mijoro ianao raha mino fa ny tananao ankehitriny dia tsara lavitra noho ny mpivarotra ary manome anao ny mety ho mpandresy indrindra.
Saraho: Mampisaraka ny tananao ianao raha matoky ianao fa ny tanana vokatr'izany dia hanome anao fahafaham-po tsara kokoa.
Double: Mpilalao indroa heny rehefa matoky ny tanany izy ireo dia handresy, ary te hahazo lanja lehibe indrindra avy amin'izany izy ireo amin'ny alàlan'ny avo roa heny ny habetsaky ny lalao mandeha.
Surrender: Raha mino ianao fa tsy manana fandresena ny tananao, dia mety hisafidy ny hanolo-tena ianao.
Fitsipiky ny Blackjack Classic
Mazava ho azy fa misy lalao 21 mainty jack misy fitsipika manokana hafa ilainao mba hijerena haingana alohan'ny hanaovana izany. Mora ny manolo-tena ho tadidiny, ka tsy tokony hanana olana ianao amin'ny farany ambany amin'ny lalao karatra 21.
Amin'ny ankamaroan'ny dikanteny mahazatra an'ny BlackJack, ny mpivarotra dia tokony hikapoka amin'ny malefaka 16 ary hijoro amin'ny malefaka 17
Ny Blackjack voajanahary dia handoa 3: 2, ary ny mainty hoditra dia mahery vaika kokoa noho ny karatra 21 hafa
Ao amin'ny BlackJack Blackjack, azonao atao ny mampisaraka ny tananao indray mandeha ary avy eo dia namely imbetsaka isaky ny tanana. Na izany aza, raha mizara acs roa ianao, dia hahazo karatra iray ihany ianao isaky ny manana ace.
Mety hampisaraka tsiroaroa marobe anefa ianao.
Indraindray, afaka mahazo avo roa heny ianao aorian'ny fisarahana, miankina amin'ny kinova amin'ny lalao.
Ny mpilalao dia mety tsy avela hidina indroa amin'ny karatra sasany ary matetika avela hidina indroa ao anaty karatra hatramin'ny 9, 10, na 11 isa.
Raha misafidy ny hampitombo avo roa heny amin'ny karatra fanokafana ianao, dia hasianao karatra fahatelo.
Ny BlackJack Blackjack dia ahafahanao mividy fiantohana fiantohana, fa ity filokana ity dia heverina ho hevitra ratsy.
Ireo fitsipiky ny BlackJack mahazatra ireo dia tokony hanampy anao bebe kokoa amin'ny lalao. Ny lalao tsirairay dia mirona tsy mitovy, ka tsara kokoa ny mijery ny fitsipika manokana. Ohatra, ny 21 + 3 Blackjack dia hanisy beton-tsarimihetsika manokana "poker" manokana ary ampidiro ny fitsipika ankapobeny amin'ny ankapobeny.
Blackjack klasic payouts
6: 5 Raha mampiseho ACE ny mpivarotra
3: 2 amin'ny ravina voajanahary
Paikady mahazatra mahazatra
Amin'ny ankapobeny dia fomba roa hilalao ny Blackjack Classic Classic. Tsy maintsy mandinika ianao raha toa ka malefaka 17 na mitsoka amin'ny malefaka 17 ny mpivarotra. Samy hikatsaka arakaraka ny fitsipiky ny lalao manokana. Black Jack 21 dia mamela anao hanatsara ny toe-javatra.
Mijoroa amin'ny 18+ isa amin'ny tanana mafy ataon'ny mpilalao amin'ny 2-a (mpivarotra mpivarotra)
Voadona amin'ny 4-7 isa eo an-tanan'ny mpilalao manohitra ny 2-a (mpivarotra mpivarotra malefaka 17)
Double amin'ny 17 isa eo an-tanan'ny mpilalao manohitra ny mpivarotra 2-6, fa raha tsy izany dia ny mpivarotra dia mampiseho 7-A (mpivarotra amin'ny malefaka 17)
Araho foana ny tanan'ny mpilalao mampiseho ny 88, 99, Aa, rehefa misy ny mpivarotra dia malefaka 17. Ohatra, hijoro amin'ny 7 sy 10 ny mpivarotra ianao raha manana 99.
Ny toe-javatra tsirairay amin'ny lalao iray amin'ny blackjack mahazatra dia tsy manam-paharoa. Izany no antony nanananay lisitra vitsivitsy vitsivitsy mety hitranga. Tsy mila mitadidy ireo kilalao tsara indrindra ireo ianao satria afaka mijery fotsiny ny paikady milaza ny iray amin'ireo tabilao.
BlackJack77 no miavaka amin'ny aterineto fanompoana. Eto dia afaka mahita ny zava-drehetra momba ny blackjack nitsinjaka; fitsipika sy ny tetika, tetikady tsara indrindra, misy karazana blackjack, tombontsoa lehibe indrindra - ny fampahalalana manan-danja rehetra nivory teo amin'ny tranonkala iray mba hamonjy ny fotoana sy ny vola.
BlackJack 77 dia vohikala tsy miankina, izay tsy mpikamban 'Casino aterineto, izay manome vaovao mikasika ny aterineto blackjack. 2009-2022. Zo rehetra voatokana
Andramo milalao blackjack amin'ny trano filokana soso-kevitra!
Mahazoa bonus mahavariana amin'ny casino an-tserasera azo antoka
Raiso ny bonus